Hordhac: Arsenal vs Leicester City – DAGAALKA Kaalmaha
By axadle Last updated Jul 7, 2020
Arsenal oo dib u helaysa kalsoonideedii hore, isla markaana rajo ka qabta inay soo gasho kaalmaha sare oo ay ugu yaraan boos ka diyaarsato tartanka Europa League, ayaa waxay qaabilaysaa Leicester City oo kaalinta saddexaad ku jira, laakiin ay cidhiidhi ku hayaan Chelsea iyo Manchester United oo sanka usoo saaran.
Woqooyiga London, waxa uu caawa noqon doonaa meesha ay isha ku hayaan taageereyaasha kubadda cagta oo kaliya aan ku koobnayn kuwa Arsenal iyo Leicester, laakiin sidoo kale Jamaahiirta Chelsea iyo Manchester United ayaan ka jeedsan doonin maadaama ay natiijada ciyaartani saamaynayso kooxahooda.
Arsenal oo u muuqatay inay uga dhamaatay kaalmaha sare oo xili ciyaareedkan ay meel hoose ku dhici doonto markii ay laba guul-darro oo xidhiidh ah kala kulantay Manchester City iyo Brighton & Hove Albion labadii kulan ee ugu horreeyey ee lagu soo laabtay ciyaaraha, ayaa dib kasoo noolaatay, waxaanay guuleysatay afar ciyaarood oo xidhiidh ah oo iskugu jira saddex kulan oo Premier League ah iyo FA Cup, kuwaas oo keenay kaalinta toddobaad, isal markaan saddex dhibcood ka hooseeya Wolves oo lixaad ku jirta.
Arsenal way ugu filan tahay inay isreeb-reeb usoo gasho tartanka Europa League booska ay hadda ku jirto ee toddobaad, laakiin damacoodu wuxuu yahay inay xataa tijaabiyaan inay soo qabtaan Manchester United oo shanaad fadhida, kana horreysa lix dhibcood, laakiin kulamada kooban ee ka hadhay horyaalka ayaanay suurtogal u ahayn inay Red Devils gaadhi karto.
Tababare Mikel Arteta ayay kalsooni weyn gashay Sabtidii markii ay 2-0 kusoo karbaasheen Wolverhampton Wanderers oo ay ugu tageen garoonka dhibta badan ee Molineux Stadium oo ay ugu dambaysay inay saddex dhibcood kala soo laabtaan September 2016.
Dhibaatooyinka ugu badan ee Arsenal haysay oo ahaa kuwo dhinaca difaaca ah, waxa laga dareemayay xasillooni saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay shabaqooda nadiif ka dhigeen, taas oo noqotay markii ugu horreysay ee aan goolal laga dhalin tan iyo November 2017.
Dhinaca kale, Leicester City ayaa dhibco badan lumisay intii ciyaaruhu dib u bilaabmeen, waxayse dariiqa guusha kusoo laabatay Sabtidii oo ay 3-0 ku garaaceen Crystal Palace, taas oo soo afjartay afar ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay guulo la’aan ka ahaayeen dhamaan tartamada.
Jamie Vardy oo kasoo laabtay dhaawac ayaa laba ka mid ah goolasha Sabtidii dhaliyey, laakiin maanta ayay u taallaa shaqo adag oo ah inuu ku dedaalo inuu taabto shabaqa Arsenal si uu kooxdiisa ugu xaqiijiyo in aanay lumin booska kaalinta saddexaad, isaguna shaqsiyan uu usii dheeraysto tartanka kabta dahabka ah oo uu ku hayo 21 gool, halka Aubameyang oo kusoo xigaa uu 19 dhaliyey.
Chelsea iyo Manchester United ayaa kursi gaaban ugu fadhiya Leicester City, waxaanay sugayaan natiijada kasoo baxda ciyaartan. Chelsea waxay geli doontaa kaalinta saddexaad haddii ay Arsenal badiso ama ay barbarro ku qabato Leicester, laakiin Man United ayaa la dhibco noqon doonto oo farqiga goolasha ay Foxes afraad kaga hayn doontaa, taas oo iyaduna aan isku hallayn lahayn.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League, Arsenal waxay u ahaayeen kuwo wanaagsan oo ay heshay afar guulood iyo laba laga badiyey, waxaanay yihiin wax weyn marka loo eego qalalaasihii ay waqtiyadii hore ee xili ciyaareedka ku jireen.
Leicester City ayaa dhinaceeda luminaysay dhibcihii ugu badnaa xili ciyaareed lixdii kulan ee ugu dambeeyey, waxaana kaliya ay guuleysatay laba ciyaarood, halka laba laga badiyey, laba kalena ay barbarro gashay.
Ciyaarta: Arsenal vs Leicester City
Tartanka: Premier League, kulamada 34aad
Nicolas Pepe oo ciyaartii Wolves ku maqnaa xaaskiisa oo umulaysay, waxaana la filayaa inuu safka koowaad ee kooxda kusoo laabto, isla markaana uu farxadda ilmihiisa yar jamaahiirta Arsenal na ku siiyo farxad guuleed.
Mesut Ozil oo dhaawac ku maqnaa kulamadii ugu dambeeyey ee kooxdiisa ayuu Mikel Arteta ka sugi doonaa dhakhaatiirta ogolaansho ah haddii uu kooxda ka mid noqon karayo.
Arsenal waxay noqotay kooxda dhibaatooyinka ugu badan ee dhaawac ay soo gaadheen intii uu horyaalku dib u bilaabmay, waxaana bannaanka fadhiya xiddigaha Bernd Leno, Gabriel Martinelli, Pablo Mari iyo Calum Chambers.
Dhinaca Leicester, James Maddison ayaa wax walba u samayn doona sidii ay ugu suurtogeli lahayn inuu ciyaartan dheelo, kana soo kabto dhaawaca, laakiin lama hubo haddii uu tababare Rodgers heli doono kubbad-sameeyahan.
Ben Chilwell iyo Ayoze Perez ayaa baadhitaano caafimaad lagu samayn doonaa, waxaana la hubin doonaa taam ahaanshahooda ka hor inta aanay waqtiga ciyaarta gaadhin, kaddib markii ay labada laaciba dhaawacyo kasoo gaadheen kulankii Crystal Palace.
Ricardo Pereira iyo Daniel Amartey ayaa ku maqan dhaawac oo aan ciyaartan lagu xisaabtami doonin laakiin Vardy iyo Iheanacho ayaa u diyaarsan in weerarka ay wada-jir u hoggaamiyaan.